Tesla Powerwall2ဘက်ထရီ၊ Tesla ဘက်ထရီ၏ဒုတိယမျိုးဆက် | အစိမ်းရောင်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲ
TomàsBigordà | | စွမ်းအင်ချွေတာခြင်း, Photovoltaic နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်, အပူနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်, ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သောစွမ်းအင်, နည်းပညာအသစ်များ
La တက်စလာ Powerwall2၎င်းသည်လူသိများသော Tesla Powerwall ဘက်ထရီ၏ဒုတိယမျိုးဆက်ဖြစ်သည်။ Tesla ဘက်ထရီများသည်မဖြစ်နိုင်သလောက်နီးပါးရရှိခဲ့သည်။ ဤပုံစံအသစ်နှင့်အလွန်ကြီးစွာသောခုန်ပျံကျော်လွှားနိုင်ခဲ့သည်၊
Powerwall ကိုအသုံးချရန်ဆိုလာစွမ်းအင်နှင့်ပေါင်းစပ်ထားသည် နေရောင်၏ပေါများစွမ်းရည် နှင့်ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းလောင်စာပေါ်မှာငါတို့မှီခိုလျှော့ချ။ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ကိုနေ့အချိန်၌သိမ်းဆည်းထားနိုင်ပြီးညအချိန်တွင်မည်သည့်အိမ်ကိုမဆိုလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးနိုင်သည်။
1 Tesla Powerwall 2, ပြည့်စုံသောအိမ်စွမ်းအင်ဖြေရှင်းချက်
2 Tesla Powerwall2ဘက်ထရီ၏အားသာချက်များ
2.2 power grid ကနေလွတ်လပ်မှုကိုရနိုင်တယ်
2.4 Powerwall 2, စျေးအသက်သာဆုံးဘက်ထရီ
3 Tesla Powerwall2စစ်ဆင်ရေး
3.1 Tesla Powerwall2AC ၏သိထားသည်
3.2 Tesla Powerwall2DC ကအလုပ်လုပ်ပုံ
3.3 Tesla 2-phase တပ်ဆင်မှုများတွင်ပါ ၀ င်သည်
4 Tesla Powerwall2ဘက်ထရီအသေးစိတ်ဖော်ပြချက်
5 Tesla စပိန်ဘက္ထရီ
6 Tesla ဘက်ထရီစျေးနှုန်း
8.1 တက်စလာမော်ဒယ် s
8.2 တက်စလာမော်ဒယ် X ကို
8.3 မော်ဒယ် 3
9 Tesla ဘက်ထရီနှင့်ကိုယ်ပိုင်သုံးစွဲမှုတော်ဝင်အမိန့်
9.1 တော်ဝင်အမိန့် 900/2015
Tesla Powerwall 2, ပြည့်စုံသောအိမ်စွမ်းအင်ဖြေရှင်းချက်
အိမ်နှင့်အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် lithium-ion ဘက်ထရီအသစ် တက်စလာ Powerwall2၎င်း၏ယခင်များ၏စွမ်းရည်ကိုနှစ်ဆ။ ပထမဆုံးဗားရှင်းမှာသိုလှောင်နိုင်စွမ်း 6,4 KW ရှိသည်။
၎င်းတွင်စွမ်းအားလည်းပါဝင်သည် ပါဝါအင်ဗာတာ DC (Direct Current) တွင်သိုလှောင်ထားသောစွမ်းအင်ကို AC (Alternating Current) တွင်အသုံး ၀ င်သောစွမ်းအင်အဖြစ်အိမ်တစ်အိမ်လုံးတွင်အသုံးပြုနိုင်ရန်။
ပထမမျိုးဆက်၏စွမ်းဆောင်နိုင်မှုစွမ်းအားနှစ်ဆရှိပြီး Tesla Powerwall2သည်စွမ်းအားရှိသည် အလတ်စားအရွယ်အစားအိမ်သူအိမ်သား တစ်နေ့လုံး (၂ ခန်းသို့မဟုတ် ၃ ခန်း) ။ ၎င်းသည်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောအရွယ်အစား၊ အမျိုးမျိုးသောယူနစ်များကိုသိုလှောင်နိုင်သည့်စွမ်းရည်ကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့မီးမောင်းထိုးပြနိုင်သည် built-in အင်ဗာတာ၊ မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုလွယ်ကူစွာတပ်ဆင်ခြင်းကိုခွင့်ပြုသည်။
Tesla Powerwall2ဘက်ထရီ၏အားသာချက်များ
Powerwall2နှင့်သင်သည်သင်၏နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးစနစ်၏ထုတ်လုပ်မှုအားလုံးကိုသိမ်းဆည်းထားနိုင်ပြီးစွမ်းအင်ကိုအသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်များမှအပြည့်အ ၀ ရယူနိုင်သည်။ ဘယ်အချိန်မဆိုနေ့ဖြစ်စေညဖြစ်စေဖြစ်စေ
power grid ကနေလွတ်လပ်မှုကိုရနိုင်တယ်
တစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုသုံးနိုင်သည် lithium ဘက်ထရီ Tesla Powerwall2၎င်းကို photovoltaic နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်နှင့်ပေါင်းစပ်ခြင်းအားဖြင့်အများသုံးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုင်းပေါ်တွင် မူတည်၍ သင်၏အိမ်ကိုလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးနိုင်သည်၊ ၎င်းတွင်နှစ်စဉ်စုဆောင်းထားသောငွေများဖြစ်သည်။
Powerwall2သည်သင်၏အိမ်အားပါဝါပြတ်တောက်ခြင်းမှကာကွယ်ပေးပြီး ၀ န်ဆောင်မှုကိုပြန်လည်မပေးမချင်းအလင်းနှင့်ကိရိယာအားလုံးကိုပြaနာမရှိဘဲဆက်လက်အလုပ်လုပ်ခွင့်ပြုသည်။
Powerwall 2, စျေးအသက်သာဆုံးဘက်ထရီ
ထို့အပြင် Tesla Powerwall2ဘက်ထရီသည်စျေးကွက်တွင်စွမ်းဆောင်ရည်တစ် kWh လျှင်အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းကိုပေးသည်။ သို့ဖြင့်အိမ်အများစု၏နေ့စဉ်စွမ်းအင်လိုအပ်ချက်နှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နှင့်သမားရိုးကျလျှပ်စစ်ဓာတ်အား၏ပုံသေစွမ်းအင်ကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချပေးသည်။
Powerwall သည်တပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူပြီးပြုပြင်စရာမလိုသောအပြည့်အ ၀ အလိုအလျောက်စနစ်ဖြစ်သည်
Tesla အက်ပလီကေးရှင်းဖြင့်သင်၏ Powerwall၊ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးပြားများသို့မဟုတ်သင့်မော်ဒယ်လ် S (သို့) မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုအလွယ်တကူထိန်းချုပ်နိုင်သည်။
Tesla Powerwall2စစ်ဆင်ရေး
Tesla Powerwall2ဘက်ထရီတွင်ဗားရှင်းနှစ်ခုရှိမည်။
Tesla Powerwall2AC သည်အင်ဗာတာပါ ၀ င်ပြီး AC ဘက်တွင်နားချင်းဆက်ထားသည်
Tesla Powerwall2DC သည်အင်ဗာတာမရှိဘဲနှင့်အဓိကထုတ်လုပ်သူများ (Solaredge, SMA, Fronius, etc) ၏ charger inverters များနှင့်သဟဇာတဖြစ်သည်။
Tesla Powerwall2AC ၏သိထားသည်
ပြီးခဲ့သည့်ပုံတွင်၊a၏ပုံမှန်လည်ပတ်ပုံကိုကြည့်နိုင်သည် tesla powerwall2ဘက်ထရီ ACအိမ်သုံးဇယားကွက်ချိတ်ဆက်မှုအင်ဗာတာဖြင့်ပေါင်းစပ်ထားသော photovoltaic မျိုးဆက်စနစ်နှင့်ပေါင်းစပ်ထားသည်။
အိမ်၏လျှပ်စစ်တပ်ဆင်မှု၏ရှေ့ဆုံး (Tesla Energy Gateway) တွင်စွမ်းအင်မီတာတပ်ဆင်ထားပြီး၎င်းသည်အိမ်၏စားသုံးမှုရှိမရှိတိုင်းတာရန်တာဝန်ရှိသည်။ ဒါမှမဟုတ်ဇယားကွက်ကနေစွမ်းအင်လိုအပ်တယ်။ photovoltaic system မှထုတ်လွှတ်သောစွမ်းအင်သည်ထိုအချိန်ကအိမ်မှတောင်းဆိုသောစွမ်းအင်ထက်များပါက၎င်းသည် grid မှထွက်လာသောစွမ်းအင်ကိုတိုင်းတာသည်။
ဤနည်းအားဖြင့်, အ Powerwall2ဘက်ထရီ ပိုလျှံသော photovoltaic ထုတ်လုပ်မှုရှိပါကသို့မဟုတ်ပြားများအိမ်မှလိုအပ်သောစွမ်းအင်နှင့်စွမ်းအင်အားလုံးကိုမပေးနိုင်ပါကစွမ်းအင်သိုလှောင်ခြင်းသို့မဟုတ်မြူဆိုင်းသောနေ့များသို့မဟုတ်ညအချိန်များတွင်စွမ်းအင်သိုလှောင်သည်။
Tesla Powerwall2DC ကအလုပ်လုပ်ပုံ
မော်ဒယ် Powerwall2DC က ပုံမှန်ခဲသောခဲနေသောဘက်ထရီကဲ့သို့ချိတ်ဆက်ထားသည့် inverter charger သို့မဟုတ် hybrid inverter (SMA, Fronius, Solaredge) စသည်တို့ဖြင့်တိုက်ရိုက်လျှပ်စစ်လည်ပတ်သည်။
ဤဖွဲ့စည်းမှုသည်သီးခြားစနစ်များရှိ Tesla Powerwall ဘက်ထရီနှင့်အလုပ်လုပ်ရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်, တိုက်ရိုက်လက်ရှိခြမ်းမှာချိတ်ဆက်လျက်, ဇယားကွက် - ချိတ်ဆက်တပ်ဆင်ထားအတွက်သာ, ဒါကြောင့်ထို option ကို ရက်ရက်စက်စက် ဒါကြောင့်လည်းစဉ်းစားသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ Powerwall AC အတွက် wiring interface သည် DC ဗားရှင်းနှင့်ကွဲပြားလိမ့်မည်။
Tesla 2-phase တပ်ဆင်မှုများတွင်ပါ ၀ င်သည်
Tesla Powerwall2ဘက်ထရီသည်အဆင့်သုံးဆင့်တပ်ဆင်နိုင်သည် ထိုကဲ့သို့သော Fronius Symo Hybrid အဖြစ်သုံးအဆင့်မျိုးစပ် inverters နှင့်အတူအလုပ်လုပ်သောအခါ။
Powerwall2သည် three phase output current ကိုထုတ်လုပ်နိုင်ခြင်းမရှိသော်လည်း၎င်းကို phase တစ်ခုမှ Tesla battery ကိုထည့်ခြင်းဖြင့် three phase system တွင်တပ်ဆင်နိုင်သည်။ အဆင့်သုံးဆင့်လုံးတွင်စွမ်းအင်သိုလှောင်ရန်အတွက်ဘက်ထရီကိုလည်းအဆင့်တစ်ခုစီတွင်တပ်ဆင်နိုင်သည်။
Tesla Powerwall2ဘက်ထရီအသေးစိတ်ဖော်ပြချက်
စွမ်းရည်: 13,5 kWh
ထိရောက်မှု: သံသရာ 90%
စွမ်းအား:7kW အထွတ်အထိပ် /5kW စဉ်ဆက်မပြတ်
လိုက်ဖက်တဲ့ applications များ:
အာမခံချက်: ၁၁ နှစ်
အပေါ်ယံ: မည်သည့်အရွယ်အစားမဆိုအိမ်များကိုလျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြည့်ဆည်းရန် Powerwall ယူနစ် ၉ ခုအထိအပြိုင်ချိတ်ဆက်နိုင်သည်။
Operating အပူချိန်: -20 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှ 50 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
ရှုထောင့်: L ကိုက x W က x: D: 1150mm x ကို 755mm x ကို 155mm
အလေးချိန်: ၀.၂၃ ကီလိုဂရမ်
တပ်ဆင်: ကြမ်းပြင်သို့မဟုတ်နံရံပေါ်တွင်တပ်ဆင်ခြင်း။ ၎င်း၏တာရှည်ခံအဖုံးသည်၎င်းကိုရေသို့မဟုတ်ဖုန်မှုန့်များမှကာကွယ်ပေးပြီး၎င်းကိုအိမ်တွင်းနှင့်အပြင်၌ထားရှိရန်ခွင့်ပြုသည် (IP67) ။
လက်မှတ်: UL နှင့် IEC လက်မှတ်များ။ ၎င်းသည်လျှပ်စစ်ကွန်ယက်၏စည်းမျဉ်းများကိုလိုက်နာသည်။
အရည်အအေး: အရည်အပူထိန်းညှိမှုစနစ်သည်ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေအားလုံးတွင်ဘက်ထရီစွမ်းဆောင်ရည်ကိုမြင့်မားစေရန်အတွက် Powerwall ၏အတွင်းပိုင်းအပူချိန်ကိုထိန်းညှိပေးသည်။
La tesla ဘက်ထရီ Powerwall2ကိုစပိန်နိုင်ငံတွင် ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင်ရောင်းချနိုင်ပြီးနောက်ဆုံးဖြန့်ချိမည့်ရက်ကိုမသိရသေးပါ။ ပြီးပြည့်စုံသောလည်ပတ်မှုသေချာစေရန်အတွက်တပ်ဆင်ခြင်းကို Tesla မှအသိအမှတ်ပြုသောတပ်ဆင်သူများကသာလုပ်ဆောင်ရမည် ၅ နှစ်အာမခံ ချို့ယွင်းချက်ရှိလျှင်ဘက်ထရီကိုလုံးဝအခမဲ့အစားထိုးလိမ့်မည်။
El Tesla Powerwall2ဘက်ထရီစျေးနှုန်း LG Chem RESU သို့မဟုတ် Axitec AXIStorage ကဲ့သို့သောပြိုင်ဘက်များ၏စျေးနှုန်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကယနေ့ဈေးကွက်တွင်စွမ်းဆောင်ရည်တစ်ကီလိုဝပ်လျှင်စျေးနှုန်းအသက်သာဆုံးစျေးနှုန်းဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့သော SMA Sunny Island သို့မဟုတ် Victron Multiplus သို့မဟုတ် Quattro ကဲ့သို့သောအင်ဗာတာအားသွင်းစက်နှင့်အတူ photovoltaic စနစ်များ။ စျေးနှုန်းကအနီးမှာပါ € 6300 ဝန်းကျင်ဖြစ်လိမ့်မည် တပ်ဆင်ခြင်းအဘို့အပေါင်း€ 580 ။
ပထမဗားရှင်း၏စျေးနှုန်းသည်အနည်းငယ်သက်သာ။ ယူရို ၄၅၀၀ ခန့်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် photovoltaic နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးစနစ်ကိုဖြည့်စွက်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားကြောင်းမမေ့ပါနှင့် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးပြားထုတ်လုပ်နေကြသည်, အိမ်ကသူတို့ကိုတိုက်ရိုက်စားသုံးမှုသို့မဟုတ်မရှိစားသုံးမှုမရှိလျှင်, ဒီစွမ်းအင် Tesla ဘက်ထရီအားသွင်း။
ပြားများအလုပ်လုပ်ခြင်းမရှိသည့်အခါအိမ်သည်ဘက်ထရီတွင်သိုလှောင်ထားသောစွမ်းအင်ကိုအသုံးပြုသည်။ လိုအပ်လျှင်၎င်းသည်အထွေထွေလျှပ်စစ်ကွန်ယက်နှင့်ချိတ်ဆက်ပြီးစားသုံးနိုင်သည်။ photovoltaic တပ်ဆင်မှုနှင့်အတူ turnkey စီမံကိန်း၏ကုန်ကျစရိတ် ယူရို ၈၀၀၀ ဒါမှမဟုတ် ၉၀၀၀ အထိတက်ပါ။ ဒီကုန်ကျစရိတ်ခုနစ်နှစ်နှင့်ဆယ်နှစ်အကြား amortized မည်ဖြစ်သည်
Tesla ၏လောင်းကြေးသည်ဘက်ထရီများသာမကစွမ်းအင်ဖြင့်ဖြည့်သောပြားများထုတ်လုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ Elon Musk ၏တောက်ပသောဖြေရှင်းချက်သည်ဖန်တီးရန်ဖြစ်သည် အလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးပြား မိသားစုအိမ်ခေါင်မိုးများသို့၊ ပညာသတိရှိပြီးအသွင်အပြင်ရှိပြီးသမားရိုးကျပြားများထက်ဈေးနှုန်းချိုသာသည်
နေရောင်ခေါင်မိုးများအနေဖြင့်၎င်းတို့အားပေါင်းစပ်ထားသောနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးဖန်ထည်များဖြင့်ပြုလုပ်ထားသဖြင့်၎င်းတို့သည်သမားရိုးကျအိမ်ခေါင်မိုးများထက်သာလွန်ကောင်းမွန်သည့် Elon Musk (သူ၏တင်ပြချက်တွင်ကတိပြုခဲ့သည်) အဖြစ်ရှုမြင်ကြသည်။ အဆိုပါအုပ်ကြွပ်တစ်ခုချင်းစီရှိသည် ထူးခြားတဲ့ပုံနှိပ်သူတို့အားနီးပါးလက်မှုပညာအသွင်အပြင်ကိုပေးသည်နှင့်မျှမတို့နှစ်ခုခေါင်မိုးအတိအကျတူညီဖြစ်လိမ့်မည်။
ထို့အပြင် Tesla သည်မည်သည့်အိမ်ဒီဇိုင်းနှင့်မဆိုကိုက်ညီရန်ဒီဇိုင်းအမျိုးမျိုးကိုထုတ်ပေးလိမ့်မည်။ ၎င်းသည် SolarCity နှင့် Tesla အကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဖြစ်သည်။ Elon Musk ၏အဆိုအရ "ကျွန်ုပ်တို့သည် Tesla ကိုလျှပ်စစ်ကားကုမ္ပဏီတစ်ခုအဖြစ်ဖန်တီးခဲ့သော်လည်းပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်အရင်းအမြစ်များသို့ကူးပြောင်းခြင်းကိုအရှိန်မြှင့်လုပ်ဆောင်ရန်မှာအမှန်ပင်ဖြစ်သည်"
ကုမ္ပဏီ၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်မှတဆင့်လုပ်ချင်သူများသည်ဤနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးခေါင်မိုးကိုကိုင်ထားနိုင်သည်။ Tesla ကိုရောင်းရန်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးခေါင်မိုးပေါ်တင်ရန်ရွေးချယ်ထားသောနိုင်ငံအများစုတွင်စပိန်နိုင်ငံပါဝင်သည် ဒီထုတ်ကုန်ကိုယူထားရန်ယူရို ၉၃၀ အပ်နှံရမည် သော 2018 သည်အထိရောက်ရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
မော်ဒယ်များနှင့်ပတ်သက်လာလျှင်တက်စလာသည် ၄ ​​င်း၏နေရောင်အမိုးမိုးအုပ်အုပ် ၄ မျိုးအနက်မှ ၂ ခုသာထုတ်လွှတ်သည်။ အနက်ရောင်ဖန် tile ကိုကြွေပြားများနှင့် textured ဖန်အုပ်ကြွပ်။ ဤအတောအတွင်းသမားရိုးကျ tile နှင့် slate နှင့်ဆင်တူသည့် toscana သည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင်ရောက်ရှိမည်ဖြစ်သည်။
Musk လည်းရှိပါတယ်ရှိပါတယ်ရှင်းပြသည်သိရသည် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်အဖြစ်ပြောင်းလဲသုံးပိုင်း: မျိုးဆက် (နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးပြားပုံစံ), သိုလှောင်မှု (ဘက်ထရီ) နှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး (လျှပ်စစ်ကားများ) ။ သူ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာအဆင့်သုံးဆင့်ကိုသူ၏ကုမ္ပဏီတက်စလာနှင့်ဖုံးအုပ်ရန်ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့်အပြားများနှင့်ဘက်ထရီများပူးပေါင်းခြင်း၏စိတ်ကူး။ ယခုအချိန်အထိဆိုလာစွမ်းအင်ကိုလောင်း။ လျှပ်စစ်မီးကြိုးမပါဘဲလုပ်လိုသူမည်သူမဆိုသည်ဒုတိယကုမ္ပဏီမှတက်စလာများနှင့်တက်စလာမှဘက်ထရီများကို ၀ ယ်ရန်လိုအပ်သည်။ ယခုမှစ။ , ခြေလှမ်းများလိမ့်မည် သူတို့ကအများကြီးရိုးရှင်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပြားများနှင့်ဘက်ထရီများသည်အတူတကွလာကြလိမ့်မည်။ အကယ်၍ ၎င်းတွင် Tesla လျှပ်စစ်ကားများနှင့် charger အသစ်ထည့်ပါကကျွန်ုပ်တို့တွင်ပြီးပြည့်စုံသော ၃ ခုရှိသည်။ ၁ တွင်ဖော်ပြထားသော3in 1 ကိုလုပ်ဆောင်ရန်ကုမ္ပဏီရှိသည့်မတူညီသောကားမော်ဒယ်များကိုအောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့တွေ့နိုင်သည်။
El တက်စလာမော်ဒယ် s တံခါးငါးပေါက်ပါတဲ့ဇိမ်ခံပစ္စည်းဆိုင်တစ်ဆိုင်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှစတင်၍ စျေးကွက်တင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်လုံခြုံမှုအဆင့်အမြင့်ဆုံးဖြစ်ပြီးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွင်းနှင့်ပြင်ပတွင်ရောင်းချမှုတွင်အောင်မြင်သည်။ ၆၀၊ ၇၅၊ ၉၀ သို့မဟုတ် ၁၀၀ kWh ဘက်ထရီတပ်ဆင်ထားပြီး၎င်းသည်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရရှိသည့် Tesla Roadster ထက်သာလွန်သည်။ စွဲချက်များအကြားကီလိုမီတာ ၄၀၀ ကျော်ကျော်သွားနိုင်သည်။ အင်ဂျင်သည်နောက်ဝင်ရိုးတွင်အလုပ်လုပ်ပြီးဘက်ထရီများသည်မြေပေါ်တွင်လဲနေသည်။ ရလဒ်လား။ အားကစားကားတစ်စီးနှင့်အတူလမ်းမှတူညီသောအကွာအဝေးကိုစီးဆင်းစေရန်အတွက်ဆွဲငင်အားဗဟိုနိမ့်ကျသောအလယ်ဗဟိုဖြစ်သည်။ Tesla Model S ၎င်းကိုကွဲပြားသောစွမ်းဆောင်ချက်နှစ်ခုဖြင့်ရရှိနိုင်သည်။ နောက်ဘီးနှင့် dual-motor ကို All-wheel drive ။ ဒီနောက်ဆုံးဖွဲ့စည်းမှုသည်မည်သည့်အခြေအနေတွင်မဆိုအကောင်းဆုံးသောဆွဲဆောင်နိုင်မှုကိုဒီဂျစ်တယ်ဖြင့်စောင့်ကြည့်ပြီးထိန်းချုပ်ထားသည်။ Tesla Model S သည်ဘက်ထရီစွမ်းဆောင်ရည်ကိုအမြင့်ဆုံးထိရောက်စွာစီးဆင်းစေသည့်လိုင်းများအားလေကြောင်းစီးဆင်းမှုတွင်ခုခံနိုင်မှုနည်းပါးသောဒီဇိုင်းဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ အတွင်းပိုင်းတွင် ၁၇ လက်မ touchscreen သည်ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း၊ ကားမောင်းသူကိုမျက်နှာမူ။ ထောင့်ချိုးကင်းသောမြင်သာမှုအတွက်နေ့ရောညပါပါ ၀ င်သည်။ မျက်နှာပြင်၊ ကူရှင်ချုပ်နှင့်ချုပ်ထားသောတစ်ခုစီတိုင်းသည်အကောင်းဆုံးထိတွေ့နိုင်သောနှင့်အမြင်အာရုံအာရုံခံမှုကိုထိန်းညှိပေးသည်။ အဖြစ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလေးစားအဖြစ်။
တက်စလာမော်ဒယ် X ကို
တက်စလာသည်လျှပ်စစ်မော်ဒယ်များကိုတိုးချဲ့ခဲ့သည် တက်စလာမော်ဒယ် X. ကား၏အသိသာဆုံးသောဒြပ်စင်တစ်ခုနှင့်၎င်း၏ထူးခြားချက်တစ်ခုမှာ - အံ့မခန်းနောက်တံခါးများ တက်စလာတွင်သူတို့က 'hawk wing တံခါးများ' ဟုခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြသည်။ အတွင်းပိုင်းတွင်ခရီးသည် ၇ ယောက်အတွက်နေရာ ၃ နေရာအထိထိုင်ခုံသုံးခုပါရှိသည်။ ၎င်းတွင် ၉၀ kWh ဘက်ထရီနှင့်ကိုယ်ပိုင်ကားရပ်နားရန်နေရာ၊ အပူသားရေထိုင်ခုံများ၊ နေ့ဘက်ပြေးမီးများ၊ အလိုအလျောက်အရေးပေါ်ဘရိတ်၊ တတိယတန်းခေါက်ခေါက်၊ Tesla Model X ၏အသိသာဆုံးသောအချက်တစ်ခုမှာဓာတုဗေဒသို့မဟုတ်ဇီဝကာကွယ်မှုခလုတ်ဖြစ်သည်။ Tesla Model X သည်ကမ္ဘာ့ပထမ ဦး ဆုံးကားဖြစ်ကြောင်း Elon Musk ကဂုဏ်ယူစွာပြောကြားခဲ့သည် ဓာတုသို့မဟုတ်ဇီဝတိုက်ခိုက်ဘို့ပြင်ဆင်ကြ၏၎င်း၏အလွန်ကြီးမားသောလေစစ်စက်၏ကျေးဇူးကြောင့်အခြားမည်သည့်ခေတ်မီမော်တော်ယာဉ်ထက်မဆိုဆယ်ဆပိုများနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ပုံမှန်အခြေအနေများတွင် Tesla Model X ၏အခန်းအတွင်းရှိမည်သည့်ဆေးရုံခန်းတွင်မဆိုလေထုအရည်အသွေးကိုတွေ့ရှိနိုင်သည်။ 'ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာတိုက်ခိုက်မှု' mode တွင်ဤစစ်ထုတ်စက်သည်သာမန်ဓာတ်တစ်မျိုးထက်အဆ ၃၀၀ ပိုမိုကောင်းမွန်သောဓာတ်ပေါင်းဖိုများထက်အဆ ၃၀၀ ပိုမိုကောင်းမွန်သောအဆပေါင်း ၅၀၀၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုအဆ ၇၀၀ နှင့်ဗိုင်းရပ်စ်များကိုစီစစ်ရာတွင်အဆ ၈၀၀ အထိထိရောက်စွာစစ်ထုတ်နိုင်သည်။
ကြာမြင့်စွာစောင့်ဆိုင်းပြီးနောက်, Tesla Motors ကတင်ဆက် တက်စလာမော်ဒယ် 3, လက်ရှိ Tesla အကွာအဝေး၏တတိယအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်သော။ စီးပွားရေးအရှိဆုံးမော်ဒယ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည် (Model3ကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင်ဒေါ်လာ ၃၅၀၀၀ ဖြင့်စတင်မည်ဖြစ်သည်) သည်ကီလိုမီတာ ၃၅၀ ခန့်အကွာအဝေးတွင်ရှိပြီး၊ စက္ကန့် (၆) စက္ကန့်အတွင်း ၀ / ၀ ကီလိုမီတာနှုန်းဖြင့်စွမ်းဆောင်နိုင်သည်။ Tesla Roadster မှစတင်ခဲ့ပြီး၊ Model S နှင့်တိုးတက်ခဲ့ပြီး Model X ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်ကြီးထွားလာသည်။ ငါးခုထိုင်ခုံ, 35.000% လျှပ်စစ်နှင့်အတူ အစဉ်အလာပရီမီယံ Sedan ပြိုင်ဘက်ရည်ရွယ်သည် BMW3Series ဒါမှမဟုတ် Audi A4 လိုမျိုး။ Tesla အကွာအဝေးရှိအခြားသောမော်ဒယ်များနည်းတူနည်းပညာသည်အလွန်အဆင့်မြင့်သောကားတစ်စီးဖြစ်မည်။ အလိုအလျောက်မောင်းနှင်နိုင်စွမ်းနှင့်လျင်မြန်စွာအားသွင်းနိုင်သည့်ဟာ့ဒ်ဝဲတပ်ဆင်ထားသည်။
ကံမကောင်းစွာပဲ စပိန်နိုင်ငံသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်ကိုယ်ပိုင်စားသုံးမှုအတွက်အဆိုးရွားဆုံးသောဥပဒေပြone္ဌာန်းချက်တစ်ခုကိုခံစားနေရသည်။ လူသိများသော "နေအခွန်"ဒီစက်ရုံအမျိုးအစားကိုယူဖို့နှောင့်နှေးနေတယ်။ ကျန်တဲ့ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာဖွံ့ဖြိုးမှုကမတားဆီးနိုင်ဘူး။
El တော်ဝင်အမိန့် 900/2015 ၎င်းသည်တရား ၀ င်စားသုံးနိုင်သောအဆောက်အအုံများကိုတရားမ ၀ င် ၀ င်ရောက်မှုကိုအဆုံးသတ်စေပြီးနည်းပညာနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုအခြေအနေများကို၎င်းတို့အားပိုမိုတိကျသောတရားဝင်နည်းလမ်းဖြင့်တရားဝင်စေရန်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
သို့သော်တိကျစွာဤကဲ့သို့သောနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ - အုပ်ချုပ်ရေးအခြေအနေများကဲ့သို့သော တစ်စက္ကန့်မီတာကို install ရန်တာဝန် ဖြန့်ဖြူးသောကုမ္ပဏီနှင့်ဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းသည်တရားဝင်ဖြစ်စဉ်ကိုစျေးကြီးရသည်မှာအလွန်ခက်ခဲပြီးနှေးကွေးစေသည်။
ဤအရာအားလုံးကိုပြုလုပ်လျှင်နေစွမ်းအင်ကိုထုတ်လုပ်သောစွမ်းအင်အတွက်အခွန်ထပ်တိုးသည် 10kW ထက်နည်းသော single-phase တစ်ခုပါ ၀ င်သောလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်များဖြင့်အိမ်များသို့မဟုတ်နေရာများတွင်တပ်ဆင်ခြင်းများကိုယာယီထုတ်ပြန်သည်, ထို disincentive စုစုပေါင်းဖြစ်ပါတယ်။
ထို့အပြင်ထိုကဲ့သို့သောကဲ့သို့သောဘက်ထရီများတွင်စုဆောင်းခြင်းကိုသုံးကြောင်းတပ်ဆင် တက်စလာ Powerwall2ဘက်ထရီဒီအမိန့်ကသူတို့ကိုလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေါ်မှာမူတည်တဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့ကုန်ကျစရိတ်နဲ့လည်းအားသွင်းခိုင်းတယ်။ ဒီအယူအဆကသိပ်စျေးကြီးလွန်းတယ်၊ ဒါပေမယ့်လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံတွေကိုပိုပိုပြီးအားသွင်းပေးတယ်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ သတင်းကောင်းသည်ထိုအရာဖြစ်သည် ကိုယ်ပိုင်စားသုံးမှုကိုမြှင့်တင်ရန်အတွက်ဥပဒေအဆိုပြုချက်ကိုလက်ထောက်ကွန်ဂရက်လွှတ်တော်တွင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားလျက်ရှိသည်အစိုးရကအဆိုပြုလွှာကိုဗီတိုအာဏာသုံးပြီးချိန်မှ စ၍ ၎င်းသည်ရှင်သန်မည်လားဆိုသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့မသိသေးပါ။ စက်မှုနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ၀ န်ကြီးဌာနနှင့်ညှိနှိုင်းနေသည့်ညှိနှိုင်းမှုပေါ် မူတည်၍ Ciudadanos သည်ဗီတိုအာဏာတွင်အစိုးရ၏ထောက်ခံမှုနှင့်ထောက်ခံမှုကိုထောက်ခံသူသည်ဗီတိုအာဏာကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားမည်၊ ပယ်ဖျက်မည်ကိုစဉ်းစားနေသည်။
အကယ်၍ အဆိုပြုလွှာကိုရှေ့ဆက်သွားနိုင်ပါက RD900 / 2015 မှပြfor္ဌာန်းချက်မှမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်စားသုံးမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အကြီးမားဆုံးအတားအဆီးများကိုဖယ်ရှားပေးလိမ့်မည်။ ဒုတိယကောင်တာ, ဖြန့်ဖြူးနှင့်အတူလုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်ပုံသေနှင့် variable ကိုစွဲချက်, လူသိများတဲ့နေရောင်အခွန်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အစိမ်းရောင်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲ » ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သောစွမ်းအင် » Tesla Powerwall2ဘက်ထရီ
Yolanda Guzman ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်ုပ် 2KW အင်ဗာတာအတွက် Tesla 12 ဘက်ထရီကိုဝယ်ချင်ပါတယ်။ တစ်ခုလုံလောက်မှုရှိ၊ မရှိနှစ်ခုကိုပေါင်းရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်နားမလည်ဘူး။
Puerto Rico အတွက်သင်္ဘောကဘာလဲ?
Bayguel Baldiviezo ဟုသူကပြောသည်
အလွန်အမင်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ် .. !!
Bayguel Baldiviezo အားပြန်ကြားပါ
တစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုသောဘက်ထရီများသည် ၁၂ ကီလိုဝပ်ရှိသော Demand Demand တင်ရန်အတွက်လိုအပ်သည်။ သင်သည်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးပြားများရှိသည်။ ရည်ရွယ်ထားသည်မှာဤလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရန်အတွက် CFE ဆက်သွယ်မှုကိုဖယ်ရှားရန်နှင့် panel များနှင့်ဘက်ထရီများနှင့်အလုပ်လုပ်ရန်ဖြစ်သည်။
ANTONIO ZAVALA သို့အကြောင်းပြန်ပါ